Achọrọ nkwado gị ngwa ngwa iji gaa n'ihu. Site na isonye na saịtị a ị na-akwado ọrụ Martin Vrijland na onyinye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka nde kwuru nde mmadụ na -agide akụkọ dị iche kwa afọ, a na-anabata nkwado gị. Ọ dịịrị gị ókè ị chọrọ inye onyinye. Site na isonyere gị, enyere m aka ịlanarị ma anyị na-agbakọ ọgụ maka nnwere onwe anyị.
Nleta nile: 1.401.151